Shirka Qaramda Midoobay ee arrimaha deegaanka oo maanta furmaya - Latest News Updates
Shirka Qaramda Midoobay ee arrimaha deegaanka oo maanta furmaya
Shirkaan ayaa ah kii afaraad oo socon doono 11ka ilaa iyo 15ka bishan Maarso, waxaana diiradda lagu saari doonaa sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha deegaanka iyo wax soo saarka.
Shirkaan dadka ka soo qeeyb galayo waxa ay ku laba jibaarmayaan kuwii ka so qeeeyb galay kulankii kan ka horeeyay ee dhacay bisihii Decembar ee sannadkii 2017-kii. Waxaana ka soo qeeyb galayo hogaamiyaal caan ah oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaasha Faransiiska iyo Kenya, Emmanuel Macron iyo Uhuru Kenyatta, iyo maareeyaasha shirkadaha waaweyn.
Waxaa la filayaa in ay ka soo baxaan natiijoyin wax ku ool ah, marka uu soo gabagoowo shirkaan shanta maalmod socon doona.
Agendayaasha miiska saaranna waxaa ka mid ah sidii deeganka badda looga difaaci lahaa wasaqeeynta, gaar ahaanna caagagga, sidiii loo yaren lahaa qashinka iyo sidii loo casriyeen lahaa tignoologiyadda, taas oo gacan ga geeysan karto Isbedlka Cimilada.